चिसो बढेपछि चौँरी गोठ बेँसीतर्फ सार्नथाले - Arthatantra.com
धुनिबेशीलाई राजधानी उपशहर बनाउने त्रिपाठीको घोषणा
निर्वाचनले छोएन किसानलाई
उत्कृष्ट करदाता सम्मानित
शनिबार, मंसिर ९ , २०७४ |
चिसो बढेपछि चौँरी गोठ बेँसीतर्फ सार्नथाले
इलाम । जिल्लाको उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा चिसो बढेसँगै चौँरी गोठहरू न्यानो स्थान खोज्दै बेँसीतर्फ झर्न थालेका छन् । इलामका सन्दकपुर, कालापोखरी, ताप्लेजुङको टिम्वुपोखरी, कालीखोला, पाँचथरको फालोटलगायत स्थानबाट चौँरी गोठ न्यानोतर्फ सार्न थालिएको हो । अत्यधिक चिसो हुन थालेपछि चौँरी आफ से आफ न्यानो स्थान खोज्दै उँधो झर्ने भएकाले चौँरीपालक किसानले सोही अनुसार पुरानो खर्कतिर गोठ सार्ने गरेका छन् ।
अत्यन्तै चिसो हुने क्षेत्रमा रहेका गोठहरू क्रमशः कम चिसो हुने क्षेत्रमा ल्याइन्छ । त्यहाँ रहेका गोठहरू केही तल झारिन्छ । चौँरी बस्दै आएको स्थानमा चिसो बढेकाले त्यहाँभन्दा न्यानो स्थानमा चौँरी बस्न रुचाउँछन्, सन्दकपुर गाउँपालिका, जमुनाका कुमार गुरुङले भने । गोठसँगै गोठधनी पनि खानेबस्ने सबै सरसामान लिएर न्यानो स्थानतर्फ झर्ने गर्छन् । सामूहिक रूपमा खर्कमा बनाइएका गोठहरूमा सर्ने गरेको उनले बताए ।
इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका करिब पाँच दर्जनभन्दा बढी चौँरी गोठ चिसोबाट न्यानोतर्फ सरेका हुन् । असोज महिनादेखि गोठ उधौँली झर्ने क्रम शुरु हुन्छ । न्यानोपना नआएसम्म ती गोठहरू बेसींमै रहन्छन् । मुख्यतया वैशाख महिनादेखि गोठ उधौंली लैजाने क्रम शुरु हुने गरेको मावुका दण्डु लामाले बताए ।
उधौंली झरेको अवस्थामा चौँरीबाट उत्पादन राम्रो हुने गरेको किसान बताउँछन् । चौँरीसँगै भेडीगोठ पनि उँधो सर्न थालेका छन् । सयौँको सङ्ख्यामा रहेका भेडासहितको गोठ तल झार्न थालिएको हो ।
भेडीगोठ खर्क–खर्कमा केही दिन राख्दै तल गाउँसम्म ल्याउने गरिन्छ । जाडोयाममा टिम्वुपोखरीदेखि माथिका क्षेत्रमा पशु र मानिस बस्नसक्ने अवस्था हुँदैन । यसपालि शुरुमै चिसो भएकाले चौँरी गोठहरू बेसीतर्फ झार्न थालिएको हो ।रासस
प्रकाशित मितिः २०७४ कार्तिक १७
अब जग्गा मिच्ने र सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर फाल्नेको ड्रोनबाट अभिलेख राखिने काठमाण्डौं । बागमती सफाइ महाअभियान सुरु भएको १९६ औँ हप्ता बित्दा समेत सोचेअनुरुप नदी […]
होस गर्नुहोस् है,तपाईको नागरिकताबाट सिमकार्ड निकालेर अपराध गर्लान् ! काठमाडौ। सिमकार्ड दुरुपयोग नभएको भए दाङका व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठको अपहरणको अनुसन्धान […]
हिजो १३ सयले बढेको सुन आज १४ सयले घट्यो, के होला कारण ? काठमाण्डौं । हिजो र आज सुनको मूल्यमा दैनिक ठूलो मात्रामा उत्तरचढाव भएको छ । हिजो प्रति […]
तपाईलाई थाहा छ ? एउटा कटहरको रुखबाट हुन्छ साढे चार लाखसम्म आम्दानी ! पाल्पा । चापाकोटका ५२ वर्षीय लीलबहादुर चुनारालाई अहिले ठेको बनाउन भ्याइनभ्याई छ । विगत […]
केरा बेचेरै कमाइन्छ वर्षमा ४ लाख ! पोखरा । दृढ इच्छा शक्ति र लगनशील भएर माटोसँग खेल्न सक्ने हो भने पैसा कमाउन बिदेसिनु […]
जहाँ १३ करोड रुपैयाँ बराबरको पान खाएर थुकिन्छ …. सप्तरी । जिल्लामा वार्षिक १३ करोेड रुपैयाँ बराबरको पान खाएर थुकिने गरिएको छ । पानलाई […]